Summada gaarka ah: tusaale | Hal-abuurka khadka tooska ah
Encarni Arcoya | | La cusboonaysiiyay 28/02/2022 23:53 | Dhiirrigelinta
Dhawr sano, calaamadaynta shakhsi ahaaneed waxay ahayd erey la maqlo oo aad u badan waxaana lagu bartaa koorasyo ​​badan oo suuqgeyn ah si kor loogu qaado ganacsiga, hadday yihiin kuwa madax-banaan ama shirkado waaweyn. Laakiin waa maxay calaamadaynta shakhsi ahaaneed? Tusaalayaal noocee ah ayaanu haynaa summaynta shakhsi ahaaneed ee guusha?
Haddii aad sidoo kale rabto inaad ogaato cidda ay tahay inaad raadiso si aad u abuurto astaantaada internetka oo aad magac u samayso naftaada, tani adigaa leh.
1 Waa maxay calaamadaynta shakhsi ahaaneed
2 Summada gaarka ah: tusaalooyinka guusha la raaco
2.7 Israa Bravo
Waa maxay calaamadaynta shakhsi ahaaneed
Calaamadaynta shakhsi ahaaneed waxaa lagu qeexi karaa weedh uu yidhi Jeff Bezos, maamulihii hore ee Amazon:
"Waa waxa ay kaa sheegaan marka aanad qolka joogin."
Laakiin markaan si qoto dheer u baarno wax kasta oo ay ka kooban tahay, waxaan u qaadan karnaa inay yihiin "aqoonsiga iyo nuxurka aan ugu deeqno qofkayaga farsamada iyo jir ahaaneed si aan ula xiriirno isticmaalayaasha kale, muuqaal ama muuqaal." Si kale haddii loo dhigo, waa nuxurka shirkaddaada, sida ay isu qeexdo, sida ay u hadlayso, sida ay u labisato ...
Si aad u abuurto, waxaad u baahan tahay inaad samayso cilmi-baadhis qoto dheer oo ku lug leh:
Qofka, maadaama ay tahay inaad ogaato qofka uu yahay, waxa uu ku fiican yahay iyo waxa aanu ahayn ... si loo qeexo qaabka astaanta.
Ujeedooyinkii la lahaa, tan iyo markaas uun baa xeelad la gaari karaa.
Ogow cidda dhagaystayaashaadu tahay. Waa habka ay fariintu u gaarto dadka aad rabto. Isha, macnaheedu maaha inaad bedesho oo aad raadiso waxa macaamiishaadu jecel yihiin, maya. Nuxurkaagu waa inuu noqdaa mid gaar ah oo aan isbeddelayn sababtoo ah markaa ma noqon doonto calaamad shakhsi ah.
Summada gaarka ah: tusaalooyinka guusha la raaco
Ka taxadar inaad eegto astaanta gaarka ah ee dadka kale, sababtoo ah si toos ah ama si dadban, waad koobi kartaa iyaga iyo waxa ay ku saabsan tahay waa inaad muujiso naftaada sida aad u gaari karto isticmaalayaashaada.
Taasi waxay tidhi, hoos waxaan ku siin doonaa tusaalayaal qaar ka mid ah calaamadaynta shakhsi ahaaneed kuwaas oo ku dhiirigelin kara oo kaa caawin kara inaad qeexdo sida aad rabto inaad sameyso.
Marie waa tababare ganacsi. Taasi waxay ka dhigan tahay inay dhab tahay, fog tahay oo aad iyo aad u dhaqan badan. Laakin taas ma sameyso, waxay u rogtaa wax lagu farxo, iyada oo aan maskaxdeeda lumin ama macluumaadka ay bixiso.
Astaantiisa gaarka ahi waxa ay diiradda saartaa bulshada iyo agabka macluumaadka, taasna waxa uu u isticmaalayaa qaybta muuqaalka (website-ka, fiidyowyada, iwm.) laakiin sidoo kale qoraallada uu ku sameeyo baloogga, kuwaas oo lagu farxo oo madadaalo leh, isla mar ahaantaana waxay ku siinayaan xog aad u qiimo badan.
Ka fekerida tiknoolajiyada waxay ka fekereysaa Steve Jobs, oo ah aasaasihii Apple oo horey u rabay inuu bilaabo, wuxuu ogaa in calaamadda shakhsi ahaaneed ay ahayd wax aad muhiim u ah haddii aad rabto inaad iibiso.
Waxa uu yaqaanay sida uu isaga uga sooci karo tartanka, ma aha oo kaliya waxa uu qabanayo, laakiin naftiisa. Halkii ay si fiican u labisan lahayd oo ay uga muuqan lahayd "maalkeeda," waxay u labbisataa si fudud oo ay u isticmaashaa isgaarsiin adag si ay uga kasbato dadweynaha.
Si ka duwan inta badan haweenka koowaad ee Maraykanka, Michelle Obama waxay garanaysay sida loo sameeyo astaanteeda gaarka ah marka laga reebo kan ninkeeda. Waxayna ku samaysay iyadoo xooga saartay kuna takhasustay dhinacyada ay jeceshahay sida waxbarashada, dumarka, caafimaadka, takoorka.
Waxqabadkeeda waxaa ka buuxa sheeko-sheeko, yacni, waxay ka sheekaynaysaa qisooyin, marag-ma-doonto, sheekooyin ay soo martay oo ay la dareento oo ay kula xidhiidho dadweynaha.
Magaceeda waxaa laga yaabaa in aan laguu aqoon. Laakin buugga "Aabaha Taajirka ah, Aabaha Miskiinka ah" waxaa laga yaabaa in uu kuugu ekaado mid aad taqaan. Qoraaga, ganacsadaha iyo af-hayeenka waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan Maraykanka wuxuuna awooday inuu abuuro astaantiisa gaarka ah isagoo diiradda saaraya bixinta adeegyada iyo siinta shirarka shirkadaha.
Dabcan, waxa kale oo uu soo saaray buugaag, ciyaaraha looxa, iwm.
Bill Gates waa sida Steve Jobs, oo ah dildilaaca tignoolajiyada. Aasaasaha Microsoft waa mid ka mid ah ganacsatada ugu caansan uguna muhiimsan adduunka, astaantiisa gaarka ah ayaa awood u leh inay la qabsato waqti ka dib.
Maxaan kaaga sheegi karnaa astaantaada? Hagaag, waxay ku salaysan tahay isku dayga in la raadiyo dhinaca wanaagsan ee waxyaallaha iyo hagaajinta caalamiyeynta. Laakiin had iyo jeer laga bilaabo hab fudud, oo u muuqda qof caadi ah oo ujeeddadu tahay caawinta dadka kale.
Wax yar ayaan nafteena u dhownahay, kiiskan tusaalaha aan ku siinno waa mid ka mid ah SEO-yada ugu fiican Spain, Luis Villanueva.
Haddaad taqaanna waxaad ogaanaysaa inuu yahay qof cid walba u furan, qof kastana dhegaysta oo garwaaqsada markuu qaldamo, waxa u dheer inuu had iyo jeer wax ku darsado hadhuudhkiisa.
Habka uu u wada xiriiri karo waa mid fudud, naxariis badan, wuxuuna raadiyaa inuu ka dhigo sheeko deggan oo raaxo leh, halkaas oo aadan baran oo kaliya, laakiin ku dhawaad ​​​​dhibic dhibic ku xasuuso waxa uu sameeyay ama sheegay.
Isra Bravo waa mid ka mid ah nuqul-qorayaasha Isbaanishka ugu fiican maanta, waxayna u dhistay sumaddeeda gaarka ah laga yaabee si ka duwan kuwa kale. Weedhaha ay ka midka yihiin "Aan aragno, waxaa jiri doona...", "hal shay", "waa hagaag", "laga yaabee oo wax baad baran doontaa" wuxuu geliyaa qaar badan oo ka mid ah iimaylkiisa waxayna qofka ka dhigaan inuu si sax ah u ogaado cidda uu la hadlayo.
Waxa uu qabanayo si toos ah ayuu ugu jiraa, emails-kiisuna, sida boggiisa oo kale, ayaa isaga wakiil uga ah, qof aan waqti lumin, dadka kalena ka dhigin in ay lumiyaan.
Weedha Arguiñano ee " taajir ah, taajir ah oo si wanaagsan loo aasaasay " ama xaqiiqda ah in uu ku dhejin jiray dhir wax walba waa nala sii joogay. Waxa uu ahaa mid ka mid ah cunnooyinka ugu horreeya ee isaga ka sooca kuwa kale isaga oo ka dhigaya cunto karinta "madadalo". Waana in marka aan karinno aynaan dhab ka ahayn in aan ku darno dhammaan maaddooyinka, mana diiradda saarno.
Waxaan la hadalnaa dad kale, waxaan daawadaa TV-ga… Waana waxa uu sameeyay. Marka uu karinayo, waxa uu si kaftan ah ama sheeko-sheeko ah ula dhaqmi jiray hab-raaca iyo tillaabooyinka uu samaynayo, isaga oo aad mooddo in uu fool-ka-fool dadka kula hadlayo.
Sida aad arki karto, waxaa jira tusaalooyin badan oo ku saabsan calaamadaynta shakhsi ahaaneed kuwaas oo kugu dhiirigelin kara inaad adigu sameysid. Laakiin waxa ugu muhiimsani maaha in aad iska dhigto qof aanad ahayn, balse waa in aad kor u qaaddo qaybta aad doonayso in ay dadka kale ogaadaan oo ay u arkaan in ay adiga kaa muuqato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Summada gaarka ah: tusaale